बृद्धहरुलाई पेन्सन दिँदै गुल्मीको एक सहकारी – Gulmiews
बृद्धहरुलाई पेन्सन दिँदै गुल्मीको एक सहकारी
September 11, 2015 Sanju Kauchha
गुल्मी, भदौ २४ । स्थापना कालको पच्चीस वर्षको अबसरमा गुल्मीको लेकाली स्वावलम्वन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तम्घास गुल्मीले रजत महोत्सव मनाउँने तयारी गरेको छ ।
रजत महोत्सववर्ष अबसरमा शेयर सदस्यलाई पेन्सन समेत दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । क्रमिक रुपमा रकम बृद्धि गर्दै जाने गरी यस संस्थाले ६० वर्ष उमेर पुगेका र अपाङ्गहुने शेयर सदस्यहरुलाई मासिक २ सयका दरले पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ । सदस्यहरुले पेन्सन पाउनका लागि कम्तीमा १५ वर्ष त्यस सहकारी संस्थामा निरन्तर आवद्ध हुनु पर्ने बताईएको छ । संस्थाले कक्षा १ देखि स्नातक तह सम्म अध्ययान गर्ने शेयर सदस्यका छोरा छोरीहरुलार्इृ छात्रवृत्ति समेत दिदै आएको छ ।
यसरी शेयर सदस्यहरुलाई पेन्सनदिने घोषणा गर्ने सहकारी जिल्लाको पहिलो सहकारी हो । बचत तथा ऋण सहकारी संघ, गुल्मी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि.(नेप्सकुन) काठमाण्डौं र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.काठमाणडौमा समेत आवद्ध रहेको त्यस स्वावलम्वनसहकारी संघ उत्कृष्ट कार्य गरे वापतविभिन्न संघ संस्थाबाट पुरस्कृत समेत भएको छ ।
पच्चीस वर्ष अघि २५ जना सदस्यहरुले एक एक रुपैयाँका दरले संकलन गरेर स्थापना गरेको गुल्मीको यो सहकारीले २५ औं वर्ष पुगेको अबसरमा रजत महोत्सव मनाउँने तयारी गरेको हो । पच्चीस औं वर्षगाठको अवसरमा संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ४६ करोड कारोवार भएको जानकारी दिएको हो । २०४८ सालपौष ३० गतेका दिन २५ जनाको समुहले मासिक ३०÷३० एक रुपैयाँका दरले वचत संकलन गरी स्थापना गरेको यस सहकारीमा यस आर्थिक वर्षमा उक्त रकमकारोवार गर्न सफल भएको संस्थाले जनाएको जनाएको छ । यस सहकारीमा शेयर पुँजी १ करोड ५१ लख ६७ हजार ५ सय रहेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थागत कोष ९८ लाख ६ सय ८७ रुपैयाँ रहेको, १४ कारोड ७४ लाख ४४ हजार ८ सय १९ बचत गरिएको र १४ कारोड ८० लाख७० हजार ९ सय १० रुपैयाँऋण लगानी भएको छ । संस्थाका नावालक ६ सय १५ सहित कुल १९ सय ७० जना सदस्य रहेकका छन् ।
जिल्लाका पुरानो सहकारी संस्था यस वर्ष देखि घडेरी खरिद कोषको समेत स्थापनागर्ने भएको छ । आज देखि विविध कार्यक्रमका साथ सो सहकारी संस्थाको स्थापनादिवस पौष ३० गते सम्म विविध कार्यक्रम गरि मनाईने संस्थाका सचिव भुवन अर्यालले जानकारी दिँए ।
Polls Archive बिदेशका खबर	गुल्मी सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाद्धारा पुर्नमिलन तथा सहयोग...	२ वटै किड्नी फेल भएकी गुल्मेली चेलीलाई बेलायतबाट ३ लाख २७ हज...	गल्कोट समाज जापानको प्रथम पूर्ण बैठक सम्पन्न, भूकम्प प्रभावि...	गुल्मेली पत्रकार थापालाई अमेरिकामा बिशेष सम्मान...	ईण्टरनेटबाट	ओझेलका खबर	ओझेलका खबर – घर भत्केर छाप्राको बास, बाबु बितेर आर्कैक...	रेडियो कार्यक्रम “ओझेलका खबर” समग्रमा लुकेको-लुकाईएको, दबेको-दबाईएको आवाज हो । यो कार्यक्रमले समाजमा रहेका भ्रष्ट्राचार, अनियमितता र अन्य अनैतीक कृयाकलापहरुको डटेर समाना गर्दछ ।...	गुल्मीको मौसम	Mostly Cloudy	14 °C	23 Oct 2016
प्रायोजित बिज्ञापन	@gulminewsयार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महतो छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ) https://t.co/05ZdGWJCcI #Gulminews #Gulmi11 hours agoRetweetमहेश बस्नेत गुल्मी आउँदै https://t.co/BT8pgJCcek #Gulminews #Gulmi15 hours agoRetweetतलको पानी माथी उक्लीएपछि… https://t.co/uxPrSvEk3K #Gulminews #Gulmi15 hours agoRetweetदलित वस्तीमा जाँड रक्सी झै–झगडा न्युन https://t.co/VA0mRVQGxl #Gulminews #Gulmi17 hours agoRetweetपहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन https://t.co/vmnnk4bdu1 #Gulminews #Gulmi2 days agoRetweet अपराध खबर	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	गुल्मीका एक युवाको बाटोमा कुटपिट, भिरमा शव फेला, हत्या अभियो...	शवको पहिचान : नेटाकी ८६ बर्षिय जसा श्रीस...	Gulminews Team	गुल्मीन्युज डट कम